Mey 15, 2018 Admin
Manambara Coinbase tariny dia ny rafitra entana
Cryptocurrency fifanakalozan Coinbase nilaza izany tamin'ny fomba ofisialy fandefasana Coinbase Zo Hikarakara, ny vokatra mikendry ny fanohanana ny rafitra cryptocurrency fananganan-jaza.
Coinbase Zo Hikarakara dia iray fitehirizana fanompoana crypto mivantana amin'ny ankapobeny andrim-panjakana ara-bola.
Ny vokatra dia ampahany ny tariny dia ny rafitra entana ho nanomboka. Coinbase nanazava ny antony dia nisafidy ny hanomboka ny vokatra eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao, nanao hoe::
“Tao anatin'ny volana vitsivitsy ny 100 fefy vola irery ihany no nahariana fa vola sy ny varotra cryptocurrency.”
Coinbase Zo Hikarakara dia miara-miasa amin'ny US Fiarovana & Exchange Commission voafehy ireo mpivarotra broker-, dia toy izany no fanakambanana amin'ny antoko fahatelo-fanaraha sy ny tatitra ara-bola fankatoavana, mahafeno ny fepetra takina amin'ny “SEC nifehy broker-mpivarotra.”
Kraken donates $ 1m mba blockchain vondrona fisoloana vava Coin Center
Jesse Powell, Tale Jeneralin'ny ny cryptocurrency fifanakalozana Kraken, nanome $1 tapitrisa ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa Coin Center tamin'ny Alatsinainy alina teo amin'ny fisoloana vava ny fikambanana isan-taona any New York Gala City. Kraken nampanantena ihany koa ny mifanaraka misy fanomezana ho Coin Center mandra-pahatapitry ny volana, hatramin'ny $1 tapitrisa.
Izany no fanomezana lehibe indrindra tokana natao Coin Center, hoy Neeraj Agrawal, mpitondra tenin'ny amin'ny Washington, DC mihevitra fa miorina tanky.
Bank of Zimbaboe mandrara andrim-panjakana ara-bola mampiasa Bitcoin
Ny Reserve Bank of Zimbaboe no baiko ara-bola rehetra andrim-panjakana ao amin'ny firenena mba hampitsahatra avy hatrany varotra na transacting in cryptocurrencies.
Ny foibe ara-bola banky nanao hoe: fikambanana dia tokony hivoaka na misy fifandraisana amin'ny virtoaly vola fifanakalozana ao anatin'ny 60 andro ary miroso fa hivarotra sy restitute kaonty efa misy mizana.
RBZ tsoratry ny banky andrim-panjakana, Norman Mataruka, hoe: "Toy ny vola ny manam-pahefana, ny Reserve Bank of Zimbaboe no hiandraikitra ny vahoaka fitokisana ary manana adidy hiaro ny fahitsian'ny rafitra fandoavam-bola… ny Reserve Banky dia hanohy ny fanaraha-maso akaiky faritra sy maneran-cryptocurrency fivoarana mba hampahafantarana politika tari-dalana. "
Korea lehibe indrindra cryptocurrency fifanakalozana Upbit manamafy ny vola rehetra dia tena
UPbit Nanamafy ny vola rehetra ao cryptocurrency dia tena, araka ny notaterin'ny @CryptoOfKorea aloha.
Korea Atsimo cryptocurrency fifanakalozana lehibe indrindra dia nanambara fa tsy fitaovana mpampiasa vola sy ny mpampiasa vola mamitaka.
Thailand waives 7% VAT amin'ny crypto po sy manamafy 15% Cap tombony hetra
Ny Sampan-draharahan'ny Revenue Thailand dia waive ny lanjany-nanampy hetra (VAT) ho an'ny olona eo amin'ny raharaham-barotra tany cryptocurrencies fifanakalozana tsena nankatoavin'ny ny Fiarovana sy ny Exchange Commission (SEC).
Ny lalàna vaovao mifehy cryptocurrency varotra tonga-kery tamin'ny May 14. Saroch Thongpracum, ny sampan-draharaha ara-dalàna ny talen'ny raharaha, Hoy ny Talata dia mety hamoaka fitsipika waiving ny 7 isan-jato-VAT ho an'ny mpampiasa vola tsirairay mba hampihenana ny hetra entana.
Olona dia mbola tsy maintsy mandoa ny 15 isan-jato-tombony renivohitra hetra, fantatra ihany koa ho toy ny tsy fandoavana hetra, amin'ny fidiram-bola amin'ny raharaham-barotra Nahazo ao.
Cryptocurrency fifanakalozana BitOasis mampiato Fiat withdrawals
Dubai-monina fifanakalozana BitOasis dia mihantona Emira Arabo Mitambatra Dirham / BTC varotra, nitanisa ny olana amin'ny banky miasa eo amin'ny fifanakalozana ihany.
Nisy fifandraisana nalefa tany amin'ny mpampiasa BitOasis omaly fa manomboka Talata, intsony dirham azo alaina avy amin'ny fifanakalozana, namela ireo mpampiasa amin'ny ankehitriny ihany no hifindra any an-kafa ny mahay mandanjalanja na ambony izany bebe kokoa dirham raha tianao.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy daty voatendry ho nandrafitra ny dirham withdrawals sy mipetraka amin'ny alalan'ny tariby famindrana.
LedgerX fanavaozana mpampiasa interface tsara ho an'ny safidy Bitcoin varotra
Sampanteny Bitcoin sehatra LedgerX dia fandefasana vaovao, tsotra interface tsara izay mamela mahazo liana Bitcoin mpampiasa vola eo amin'ny Holdings.
Ny tolotra vaovao, nanambara talata, miasa ny efa misy koa amin'ny antso Bitcoin safidy amin'ny mpampiasa streamlined face ho an'ny mpampiasa vola, araka ny LedgerX filoha sy lehiben'ny manamboninahitra mety Juthica Chou.
“Izahay mahita bebe kokoa ny fangatahana ho an'ny olona izay te mba hahazoana karazana tombontsoa afaka ny Bitcoin sy mampisambotra dia tsy tena voajanahary ny olona – indrindra fa mampisambotra izay mahazo ny liana indray amin'ny Bitcoin. Noho izany isika mahita mpandray anjara niverina varotra.”
Blockchain News 13 Janoary 2018
Olom-pirenena Koreana Atsimo ...
Browser mifototra amin'ny harena ankibon'ny tany dia lasa fahita matetika
Vola madinika mifototra Browser M ...
Korea Atsimo Minisitry ny Vola: Crypto nandrahona Fiat System
Korea Atsimo ny Financ ...
Mey 25, 2018 amin'ny 12:50 AM
Mey 29, 2018 amin'ny 1:30 AM
Jona 11, 2018 amin'ny 12:24 AM
Jona 22, 2018 amin'ny 6:17 AM
You are really a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. koa, The contents are masterwork. You have performed a magnificent job in this topic!